တံတား တည်ဆောက်ရာ၌ မလွတ်ကင်း၍ ဖယ်ရှားခဲ့ရသည့် နေအိမ်များနေရာ၌ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်လာသည့် လူေ?? - Yangon Media Group
တံတား တည်ဆောက်ရာ၌ မလွတ်ကင်း၍ ဖယ်ရှားခဲ့ရသည့် နေအိမ်များနေရာ၌ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်လာသည့် လူေ??
မြဝတီ၊ ဧပြီ ၄
မြန်မာ- ထိုင်းအမှတ်(၂) ချစ်ကြည်ရေးတံ တားကြီး တည်ဆောက်ရာ၌တံတား ဧရိယာနှင့်မလွတ်ကင်းသည့် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ဘက်ခြမ်း မှ နေအိမ်များကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းက သက်ဆိုင်ရာမှ ဖယ်ရှားခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ အဆိုပါနေရာ၌ ဖယ်ရှားခံရသူအချို့မှာ လူနေတဲများ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ကာ ခြံစည်းရိုးများ ကာရံထား သောကြောင့် ဧပြီ ၄ ရက် နံနက် ၁ဝနာရီတွင် သက်ဆိုင်ရာမှ ထပ်မံ ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းက ဖယ်ရှားခံရသည့်အိမ်များအနက်မှ အချို့မှာ ယခင်ဖယ်ရှားရှင်း လင်းခဲ့သည့်နေရာများ၌ လူနေတဲများ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ကာ ခြံစည်းရိုးများပြန်လည်ကာရံထားသည့်အတွက် ပြန်လည်နေထိုင် ခြင်းမပြုရန်နှင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံများ ပြန်လည်ဖျက်သိမ်းပေးရန် သက်ဆိုင်ရာမှ အကြောင်းကြားစာများ ထပ်မံပေးပို့ခဲ့သော်လည်း အလေး ထားဆောင်ရွက်မှုမရှိသဖြင့် ယခု ထပ်မံ၍ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရခြင်း ဖြစ်သည်။
”အခုပြန်ဖျက်ရတဲ့နေရာက အရင်၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ၂ ရက်က တံတားကြီးဧရိယာနဲ့မလွတ်လို့ ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့နေရာပါ။ ဒါကိုအခု လူနေတဲတွေ ပြန်ဆောက်နေကြသလို ခြံစည်းရိုးတွေပြန်ကာနေ ကြတယ်။ အခုအချိန်မှာ ပင်မလမ်း ဖောက်လုပ်ပြီးစီးသွားပေမယ့် လမ်း ဦးစီးဌာနက ဆက်လုပ်စရာတွေ ကျန်နေသေးတယ်၊၊ သူတို့လုပ်ရမှာက အဖျက်ခံရလို့ တကယ်နေစရာ မရှိဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီကိုတင်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က သူတို့နေထိုင်ရေးကိုစီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး နေအိမ်တွေ အစားထိုး ပြန်လည်တည်ဆောက် နိုင်ဖို့ကိုလည်း ရပ်ကွက် ၆၊ ၇ ဖော် ထုတ်ပြီးရင်နေစရာနေရာပေးသွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က အခုထိ အစိုးရက ပေးတဲ့လျော်ကြေးလည်း မယူသလို နေစရာလည်းအစားထိုး ပြန်တောင်းယူတာတွေ တစ်ဦးမှ မလုပ်ကြပါဘူး”ဟု မြဝတီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတေဇာအောင်က ပြောသည်။ ယနေ့ရှင်းလင်းရာတွင် လူအင်အား ၅ဝ ခန့်နှင့်အတူ စက်ယန္တရား ဖြင့် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖူလ်ဟမ် တန်းဆင်းသွားခဲ့ရပြီးနောက် တိုက်စစ်မှူးရှာရယ် ဒေါ့မွန်သို့ ပြန်မည်
တမူး - ဟုမ္မလင်း ကားလမ်းတွင် အဓိကကျသည့် နမ့်ယားချောင်း တံတားကို လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အပြီး တည်ေ?
အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်နှင့် မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်တို့ သမိုင်းဝင် တွေ့??
အမြန်လမ်းပေါ်တွင် ကားမီးလောင်၍ လူရှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည့်အမှုမှ ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူအား အလုပ်နှင့?
ဟာဇက်၏ ကျောနံပါတ် ၁ဝ ကို ဝတ်ဆင်မည်ဟု ဝီလျံပြောဆို